वाम एकता : समाजवादका लागि वा सत्ता दाउपेचको हतियार ? – मुलधार न्युज
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > वाम एकता : समाजवादका लागि वा सत्ता दाउपेचको हतियार ?
१८ आश्विन २०७४, बुधबार १४:०३
एमालले माओवादीलाई लगाएको आरोपअनुरूप यो साँच्चै उग्रवादी रहेको हुन्थ्यो भने लिट्टेहरू जस्तै राजनीतिको रंगमंचबाट विलय भइसक्थो। जडसूत्रवादी मात्र रहन्थ्यो भने जड भएर सकिन्थ्यो होला। किरणले उक्त यात्रा रोजे पनि माकेले त्यो स्वीकार गरेन। आज पनि मुलुक संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीको मुद्दालाई संस्थागत गर्ने महान् पर्वमा जुटेको छ, जुन माकेको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित ब्राण्डेड माल हुन्। भलै यसलाई ठाउँ, गाउँ, सन्दर्भअनुरूप कालोबजारियाहरूले बेला बखत आफ्नो उत्पादनको लोगो टाँसेर बजार नबुझ्ने ग्राहक समक्ष बेच्ने गर्दछ। अहिले बजारमा एमाले र माकेको तालमेल र एकताको सन्दर्भले दुवैतिर मात्र नभएर चौतर्फी एउटा रहस्यमय जिज्ञासा पलाएको छ। यो तालमेल वा एकता केका लागि? प्रदेश नम्बर २ को चुनावी परिणामपश्चात् एमालेमा उत्पन्न अन्तरविरोध र आगामी निर्वाचनपश्चात नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक लामो समयसम्म आफू एक्लिने सुदूर भयका कारण माकेको सपोर्टमा त्यो क्षतिपूर्ति गर्ने कुत्सित मनोविज्ञानबाट त प्रेरित छैन? वा माकेले समग्र स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दै आगामी चुनावमा आफ्नो साइज अलिकति फराकिलो पार्ने अपरिपक्व दिवास्वप्नबाट त ग्रस्त छैन? यी दुवै स्वार्थमा एकता वा तालमेल असान्दर्भिक र अप्राकृतिक हुनेछ। विशेषतः यो एकताको प्रसंगले केही माक्र्सवादी विद्वान तिलमिलाएका देख्दा उदेक लाग्छ। विद्वानहरूलाई भन्नु केही छैन। तर तिममिलाएका केही आफ्नै र उतापट्टिका मित्र एवं ‘कमरेड’हरूसँग केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ। पहिलो प्रश्न माकेका मित्रहरूसँग।
प्रधानसेनापति महिला फुटबलः उपाधिका लागि आर्मी र एपिएफबीच प्रतिस्प्रर्धा
घुस लिँदालिँदै अख्तियारद्धारा अधिकृतसहित पाँचजना पक्राउ
वडाध्यक्ष सुवालसहित १० जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी